Nakuba sebekholwe kuNkulunkulu kwaze kwaba manje, abantu abaningi basalandela lokho okudidayo futhi okungacacile. Abanawo nomncane umqondo womsebenzi kaNkulunkulu futhi basaqhubeka bephila emagameni nasezimfundisweni. Ngaphezu kwalokho abaningi yima besazongena ezigabeni ezintsha ezingokoqobo ezifana “nesizukulwane esisha salabo abathanda uNkulunkulu”, “abangani bakaNkulunkulu”, “izibonelo othandweni lukaNkulunkulu”, “indlela kaPetru yokuphila”; kunalokho, abakufunayo kuseyinto engacacile nengaqondakali kahle, basaphumputha imfundiso, abanawo umqondo wokusebenza kwala mazwi. Lapho uMoya kaNkulunkulu uba inyama, ungawubona uze uwuthinte umsebenzi Wakhe esenyameni. Nokho uma ungakakwazi ukuba umngani Wakhe, uma usahluleka ukuba isethenjwa Sakhe, ungaba kanjani isethenjwa sikaMoya kaNkulunkulu? Uma ungamazi uNkulunkulu wanamuhla, ungaba kanjani sesizukulwaneni sabathanda uNkulunkulu? Ingabe lawa akuwona amagama nezimfundiso ezingenalutho? Ingabe uyakwazi ukubona uMoya bese ubamba intando Yakhe? Ingabe lana akuwona amazwi angelutho? Akwanele nje ukuba ukhulume la magama nemisho, nokuthi awukwazi ukujabulisa uNkulunkulu ngezinqumo kuphela. Uyagculiseka ngokukhuluma la mazwi kuphela futhi awugculisi izifiso zakho kodwa ugculisa nemibono yakho engenangqondo, ugculise imicabango nemibono yakho. Uma ungamazi uNkulunkulu wanamuhla, lokhu kusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi wenzani, uzohluleka ukugculisa isifiso senhliziyo kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ukuba isethenjwa sikaNkulunkululu? Ingabe namanje awukakuqondi lokhu? Njengoba umngani kaNkulunkulu kungumuntu, noNkulunkulu Naye ungumuntu, okusho ukuthi uNkulunkulu usebe yinyama, waba ngumuntu. Yilabo kuphela bohlobo olufanayo abangabizana ngezethenjwa, yilabo kuphela abangaba abangani. Ukube uNkulunkulu wayenguMoya, umuntu odaliwe ubengaba kanjani umngani Wakhe?
Akunandaba ukuthi ufuna kangakanani, kumele ngaphezu kwakho konke, uqonde umsebenzi owenziwa uNkulunkulu namuhla, futhi kumele wazi ukubaluleka komsebenzi Wakhe. Kumele uqonde futhi wazi umsebenzi olethwa uNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, isimo asilethayo, nalokho okwenziwa kuphelele kumuntu. Uma ungawazi noma uwuqonde umsebenzi azele ukuzowenza enyameni, khona-ke ungayibamba kanjani intando Yakhe, futhi ungasondelana kanjani Naye? Eqinisweni ukusondelana noNkulunkulu akuyona into eyinkimbinkimbi, kodwa futhi akulula. Uma abantu bengakuqonda ngokugcwele futhi bakwenze, khona-ke akubi yinkimbinkimbi; uma abantu bengakuqondi ngokugcwele, kuyoba nzima kakhulu, futhi nakanjani umuntu uyodidwa izinto eziningi. Uma, ekufuneni kwakhe uNkulunkulu, umuntu engenayo indawo yakhe azoma kuyo, futhi engazi ukuthi kufanele abambe liphi iqiniso, khona-ke kusho ukuthi akanaso isisekelo, ngakho ngeke kube lula ukuthi ame aqine. Namuhla, baningi kakhulu abangaliqondi iqiniso, abangakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi noma ukubona umehluko phakathi kothando nenzondo. Abantu abanjalo kunzima ukuthi bame baqine. Into ewumgogodla ekukholelweni kuNkulunkulu ukukwazi ukubeka iqiniso endaweni yalo, ukuba nendaba nentando kaNkulunkulu, ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu kumuntu lapho efika enyameni nemiyalo ayikhulumayo; ungabi uthathekile, futhi kufanele ube nemiyalelo kulokho ongena kukho, futhi uyibambisise. Ukubambelela ngokuqinile kulezo zinto ekukhanyiselweni uNkulunkulu kuyokusiza. Uma kungenjalo, namuhla uyoshintsha ube okunye, kusasa uphinde ushintshe futhi ube ngokunye, awusoze waba neqiniso. Ukuba yilolu hlobo akukuzuzisi ukuphila kwakho. Labo abangaliqondi iqiniso bahlale belandela abanye: Uma abantu bethi lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke nawe uthi umsebenzi kaMoya oNgcwele; uma abantu bethi umsebenzi womoya omubi, khona-ke nawe uqala ukungabaza, noma uphinde uthi umsebenzi womoya omubi. Uhlale ulingisa amazwi abanye, futhi awukwazi ukuzitholela wena into ethile, futhi awukwazi ukuzicabangela. Lona umuntu ongazazi ukuthi ume kuphi, ongakwazi ukwahlukanisa—umuntu onjalo uyinto engenamsebenzi! Uhlala uphinda amazwi abanye: Namhlanje kuthiwa lona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa kungenzeka ngelinye ilanga kube khona othi lona akuwona umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa owomuntu nje—kodwa awukwazi ukukubona lokhu, futhi lapho uzwa kushiwo abanye, nawe usho into efanayo. Empeleni umsebenzi kaMoya oNgcwele, kodwa uthi umsebenzi womuntu; awuphendukanga yini omunye walabo abangcolisa umsebenzi kaMoya oNgcwele? Kulokhu, ingabe awukaze umelane noNkulunkulu ngenxa yokuthi awukwazi ukuphawula umehluko? Ubani owaziyo, mhlawumbe ngelinye ilanga kuyovumbuka esinye isiphukuphuku, sithi “lona umsebenzi womoya omubi,” futhi lapho uzwa la mazwi uyodideka, uphinde unamathele emazwini abanye. Ngaso sonke isikhathi lapho umuntu ekunyakazisa, uyehluleka ukuzimela, futhi lokhu kungenxa yokuthi awunalo iqiniso. Ukukholelwa kuNkulunkulu nokufuna ulwazi ngoNkulunkulu akuyona into elula. Ngeke kumane kufinyelelwe ngokulalela izintshumayelo, futhi awukwazi ukupheleliswa ngentshisekelo kuphela. Kumele ezenzweni zakho ubhekane, wazi futhi uqondiswe imiyalo, bese uzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Lapho udlule kulezo zinto, uyokwazi ukwehlukanisa izinto eziningi—uyokwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi, okulungile nokungalungile, nokwenyama nokwegazi kanye nokweqiniso. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa zonke izinto, futhi ngokwenza kanjalo, akunandaba ukuthi izimo ziyini, awusoze waduka. Yilesi kuphela isimo Sakhe sangempela.
Ukwazi umsebenzi kaNkulunkulu akuyona into elula: Kufanele ube nezinga kanye nemigomo, kufanele wazi ukuthi ifunwa kanjani indlela yeqiniso, nokuthi ibonakala kanjani ukuthi iyindlela eyiqiniso, nokuthi iwumsebenzi kaNkulunkulu yini. Imuphi umyalo oyisisekelo ngempela ekufuneni indlela yeqiniso? Kufanele nibheke ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele kule ndlela, ukuthi la mazwi ayiqiniso yini noma cha, ubani ongufakazi, nomphumela okungaba nawo kuwe. Ukuhlukanisa phakathi kwendlela yeqiniso neyamanga kudinga ulwazi oluningi oluyisisekelo, futhi okubaluleke nakakhulu ukwazi ukuthi ukhona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngoba isiqu senkolelo yomuntu kuNkulunkulu siyinkolelo kaMoya oNgcwele. Ngisho nenkolelo kaNkulunkulu osesimweni somuntu ingenxa yokuthi inyama Yakhe iwumfuziselo kaMoya oNgcwele, okusho ukuthi leyo nkolelo isengekaMoya oNgcwele. Kunomehluko phakathi koMoya nenyama, kodwa ngenxa yokuthi le nyama ivela oMoyeni, futhi iZwi liphenduka inyama, ukholo lomuntu kuyo luseyisiqu sikaNkulunkulu. Ngakho ekwahlukaniseni ukuthi yindlela yeqiniso noma cha, kufanele nibheke ukuthi akuwona yini umsebenzi kaMoya oNgcwele, ngemva kwalokho nibheke ukuthi likhona yini iqiniso kuleyo ndlela. Leli qiniso liyisimo sokuphila ebuntwini obujwayelekile, okusho ukuthi, yilokho okwakudingeka kumuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu, konke okobuntu obujwayelekile (okuhlanganisa ingqondo, ukuqonda, ukuhlakanipha, nolwazi oluyisisekelo lokuba umuntu). Lokho kusho ukuthi, kudingeka ubheke ukuthi le ndlela ingamngenisa yini umuntu ekuphileni kobuntu obujwayelekile noma cha, nokuthi iqiniso okukhulunywa ngalo liyadingeka ngokoqobo lobuntu obujwayelekile, ukuthi leli qiniso lingenzeka futhi ngelangempela, noma lihambisana nesikhathi noma cha. Uma kuneqiniso, khona-ke kungenzeka ukuthi umuntu aphile ngendlela ejwayelekile; ngaphezu kwalokho, umuntu oba ojwayelekile nakakhulu, ingqondo yomuntu iyaphelela nakakhulu, ukuphila komuntu enyameni nasemoyeni kuyahleleka, futhi imizwa yomuntu iba ejwayelekile. Lona umyalo wesibili. Kunomunye futhi umyalo, wokuthi kungakhathaliseki ukuthi umuntu unolwazi oluningi yini ngoNkulunkulu, ukuthi uyawubona yini umsebenzi onjalo, nokuthi iqiniso liyakugqugquzela yini ukuthanda uNkulunkulu kuye, kumsondeze kakhudlwana kuNkulunkulu. Kulokhu kungalinganiswa ukuthi le ndlela yindlela yeqiniso yini noma cha. Into ebaluleke kakhulu ukuthi le ndlela inengqondo yini, nokuthi iyamnika yini umuntu ukuphila. Uma ivumelana nale miyalo, kungafinyelelwa esiphethweni sokuthi lena indlela yeqiniso. La mazwi angiwasho ngoba ngifuna namukele ezinye izindlela ezintweni enibhekana nazo kusasa, nangenhloso yokuqagela ukuthi kuyoba nomsebenzi esikhathini esizayo. Ngiwasho ukuze niqiniseke ngokuthi indlela yanamuhla ngeyeqiniso, ukuze ningayingabazi inkolelo yenu ngomsebenzi wanamuhla futhi ningahluleki ukuyiqonda. Kunabaningi futhi, okuthi ngaphandle kokuqiniseka, balandele imbudane; into engenawo umyalo, futhi kumele baqothulwe kungekudala. Ngisho nalabo abaphikelelayo endleleni abayilandelayo ngokwezinga elithile abaqiniseki, okutshengisa ukuthi abanasisekelo. Ngoba ubuqotho bakho buyantula futhi isisekelo sakho siyize, awuwuqondi umehluko. UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi Wakhe, akawenzi umsebenzi ongenangqondo, akazenzi izimfuneko eziyihaba ngomuntu, akawenzi umsebenzi ongaphezu komqondo womuntu. Wonke umsebenzi awenzayo awukho ngaphezu komqondo womuntu, awubudluli ubuntu obujwayelekile, futhi umsebenzi Wakhe uvumelana nezimfuneko zomuntu. Uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele, umuntu uba ngojwayelekile nakakhulu, futhi ubuntu bakhe buvama nakakhulu. Abantu bazuza ulwazi olukhulayo ngesimo sabo esonakele esinobusathane, nangesiqu somuntu, futhi ulilangazelela kakhulu iqiniso. Lokho kusho ukuthi, ukuphila komuntu kuyakhula, futhi isimo esonakele somuntu sibhekana nezinguquko eziningi—konke lokho kuyincazelo kaNkulunkulu eba ukuphila komuntu. Uma indlela ingakwazi ukwambula lezo zinto eziyisiqu somuntu, ayikwazi ukushintsha isimo somuntu, futhi ayikwazi ukuletha umuntu phambi kukaNkulunkulu noma ukumnika ukuqonda kweqiniso ngoNkulunkulu, ngisho nokwehlisa ubuntu bomuntu nokuphakamisa umqondo wakhe, khona-ke leyo ngeke kube indlela yeqiniso, kunalokho ingaba umsebenzi womoya omubi, noma indlela endala. Ngamafuphi, ayikwazi ukuba umsebenzi wamanje kaMoya oNgcwele. Benikholelwa kuNkulunkulu kuyo yonke le minyaka, kodwa aniyazi imiyalo yokwehlukanisa phakathi kwendlela yeqiniso neyamanga noma yokufuna indlela yeqiniso. Abantu abaningi abanandaba nalezi zinto; bamane balandela iningi, futhi baphinde lokhu okushiwo iningi. Lokhu kungaba kanjani umuntu ofuna indlela yeqiniso? Futhi abantu abanjalo bangayithola kanjani indlela yeqiniso? Uma ubamba le miyalo eminingana ewumgogodla, khona-ke kunoma yini eyenzekayo ngeke ukhohliswe. Namuhla, kubalulekile ukuthi umuntu akwazi ukubona umehluko; yilokho ubuntu obujwayelekile okufanele bube nakho, nomuntu okufanele adlule kukho. Uma ngisho namuhla, umuntu engakahlukanisi lutho ekulandeleni kwakhe, nomqondo wakhe ungakakhuli, khona-ke umuntu uyisiphukuphuku kakhulu, futhi izinto azifunayo akuzona. Akukho ngisho nomncane umehluko ezintweni ezifunwa yini namuhla, futhi nakuba kuyiqiniso njengoba nisho, niyitholile indlela yeqiniso, ingabe anikayitholi? Ingabe kukhona esenikwazi ukukuhlukanisa? Siyini isiqu sendlela yeqiniso? Endleleni yeqiniso, anikaze nizuze indlela yeqiniso, anikaze nizuze lutho lweqiniso, okusho ukuthi, anikaze nifinyelele lokho uNkulunkulu akufuna kini, ngakho akukaze kube noshintsho ekonakalisweni kwenu. Uma niqhubeka nale ndlela, ekugcineni niyoqothulwa. Ngemva kokuba abalandeli kuze kube namuhla, kufanele niqiniseke ngokuthi indlela eniyithathile eyeqiniso, futhi akufanele ningabaze. Abantu abaningi bahlale bengaqiniseki futhi abalilandeli iqiniso ngenxa yezinto ezincane. Abantu abanjalo yilabo abangenalo ulwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, bayilabo abalandela uNkulunkulu bedidekile. Abantu abangawazi umsebenzi kaNkulunkulu abakwazi ukusondelana Naye, noma ukufakaza Kuye. Ngeluleka labo abafuna isibusiso Sakhe kuphela nabalandela izinto ezididayo futhi abangafuni ukulandela iqiniso ngokushesha okukhulu, ukuze ukuphila kwabo kubaluleke. Ningalokothi niphinde nizikhohlise!
Umsebenzi wokuphatha isintu uhlukaniswe waba izigaba ezintathu, okusho ukuthi umsebenzi wokusindisa isintu uhlukaniswe waba izigaba ezintathu. Lezi…